Radio Don Bosco - Hafaliana fransiskanina
Nosoratan'i Ratovoarivelo Ndrasantsoa Marie Frédeline
Lohahevitra : Finoana aina
Naseho ny : 16 avrily 2021
Matahotra ny fahafahafatesana ny olombelona. Ramose Lucien Botovasoa, olon-tsambatra, lahika fransiskanina anefa nanaiky izany an-kafaliana. Hoy izy: " Raha ny aiko no hanavotra olona maro, aza misalasala ny hamono ahy ianareo!".
Raha iainantsika tanteraka ny hafaliana lavorary izay nirin'i Md François avy any Assise, izay fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Fanahy Masina, dia afaka miady amin'ny ratsy, amin'ny fakam-panahy, amin'ny tahotra, miady amin'ny aretina isika. Fanazavana entin'ireo frera fransisikanina.